हिउँ खेल्न जाँदै हुनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी तरिकाहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
हिउँ खेल्न जाँदै हुनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी तरिकाहरु !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : १५ पुष २०७८ ०७:२५
हाल देशमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशभर सामान्य देखि पूर्ण बदली रही अधिकांश स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ भने उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपात भइरहेको छ ।
यतिबेला काठमाडौँमा पनि वर्षा भइरहेको छ । काठमाडौँमा वर्षासँगै चन्द्रागिरि, फुलचोकी, दामनलगायत उपत्यका आसपासका पहाडमा बुधबार हिमपात सुरु भएको छ ।
उपत्यकामा पानी परेसँगै बालबालिका, युवायुवतीका साथै विदेशी पर्यटकहरु हिउँ खेल्न विभिन्न स्थानमा पुगिरहेका छन् । तर हिउँ खेल्न जाँदा सुरक्षाका उपाय अपनाउन बिर्सनु भने हुँदैन ।
तपाईं हिउँ खेलिरहनुभएको छ वा खेल्न जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने दुर्घटना र चोटपटकबाट जोगिनका लागि यी कुरा ध्यान दिनुहोस् ।
वरिपरिको स्थानबारे थाहा नभइकन नहिँड्नुहोस्ः
हिउँमा धेरै नै सावधान हुनुपर्छ । आफू कुन ठाउँमा हिँडिरहेको छु, त्यसबारे पनि अवगत हुनुपर्छ । सावधान नभए चिप्लिएर लड्ने सम्भावना बढी रहन्छ ।
चिसोका लागि पहिरनः
तपाईं चिसोमा बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने सुरक्षित रहनुहोस् – न्यानो हुनुहोस् । बच्चालाई पनि बाहिर लिएर जाँदै हुनुहुन्छ भने उनीहरुलाई केही खुवाएर लैजानुहोस् । क्यालोरीले उनीहरुको शरीरलाई चिसोमा न्यानो राख्न सहयोग गर्छ ।
– यसका साथै अनुहारमा सनस्क्रिन पनि लगाउनुहोस् । हिउँ खेल्न जाँदा सनस्क्रिनको कुरा गर्दा थोरै अचम्म पनि लाग्ला तर यसले सूर्यको ८५ प्रतिशत हानिकारक विकिरणबाट जोगाउँछ ।
– एउटै गम्म परेको लुगा लगाउनुको साटो, धेरैवटा लुगा लगाउनुहोस् । माथिको लुगा पानी वा हिउँले भिजिहाले पनि त्यो फुकालेर भित्रको नभिजेको अर्को लुगामा रहन सक्नुहोस् ।
– कटनको लुगा लगाउनुको साटो ऊनको वा अन्य कपडाको लुगा लगाउनुहोस् । लामो अण्डरवेयर, हाइनेक, स्वेटर र कोट लगाउन सकिन्छ । धेरै नै चिसो छ भने अरु लुगा पनि थप्न सकिन्छ । न्यानो मोजा वा बुट लगाउनुहोस् । टाउकोलाई टोपीले छोप्नुहोस् ।
– अत्यधिक चिसोमा धेरै समय नबिताउनुहोस् ।
– घर गइसकेपछि भिजेका सबै लुगाहरु खोल्नुहोस् । यसले शरीरबाट अतिरिक्त हिट तानिरहेको हुन्छ । असाध्यै चिसो भएका शरीरका भागलाई मनतातो पानीमा डुबाउनुहोस् । रातोपाटी बाट सभार